Qalabka loogu talagalay matoorrada saliida - kuwa wax yareeya, kuwa dixirma dixiriga, dixiriyada dixiriga, sanduuqyada meerayaasha, xawaaraha yareeyayaasha, kala duwanaanshaha, marsho helical, qalabka geesaha lagu shubo, qalabka gawaarida lagu beero, cagafyada cagafyada, gawaarida xamuulka, dirxiga gooryaanka
Xawaaraha Xawaaraha & Gearbox
Dib-u-dhicis hoose oo xagal-dirxi ah oo dirxi ah
Kala duwanaanshaha xawaaraha UDL
Qalabka dhimista qalabka loo yaqaan 'Cycloidal gear gear'
Gearbox loogu talagalay mashiinnada beeraha
Matoorrada ku habboon geeska
Gawaarida gawaarida gawaarida ah
Gearboxes-yada loogu talagalay traco & auto
Gawaarida khaaska ah & sanduuqyada
Howlwadayaasha dixiriga & Bevel Gear
DC cabir yar oo matoorro ah
Dhimista SMR Shaft Mounted
Qalabka Gears & Qalabka PTO & Kuwa Kale
Shirkadaha meerayaasha ah
Qalabka giraanta Helical
Qalabyada kala duwan
Fallaadha Spline & fallaadhihii geerka
Spur gears & qalab geelleel ah
Gooryaanka dirxi & dixiriga
Bears gears & geesaha berial sprial
Gears loogu talagalay bambooyin saliid ah
Wareegga Swing / Sleewing dhalista
Bambooyin Gear ah
Wadista Korantada & Gawaarida Haydarooliga
Nidaamka wadista korantada
Y2 matoorada taxanaha
Y matoorada taxanaha
Taxane YD matoorrada xawaare badan
YS matoorada taxanaha
YC YL matoorada taxanaha
TYGZ matoorro isku mid ah
Matoorrada iskudhafan ee TYBZ
Burushyada matoorrada dc
Matoorrada dhifka-Dunida-Joogtada ah (REPM MOTORS)
Bogga ugu weyn / bamka / Gears loogu talagalay bambooyin saliid ah
Waxaan soo saarnaa dhammaan noocyada kala duwan:
Gdhegaha waayo, saliidda Mashiinnada
HYDRAULICS DRIVE- SOO SAARKA GEAR
WQ WQD bamka
Nooca ISG IRG-IRG
Nooca ISG IRG-W
Pitch iyo Yaw ayaa wada MOBILEX GFB
Maxaad noo dooran?
(1) Waxaan bixinnaa adeegyo OEM ah waxaanna u soo gudbineynaa qaabab kala duwan iyo naqshadaha ugu dambeeya macaamiisha;
(2) Waxaan lashaqeynaa macaamiisha waaweyn ee Koonfur Bari Aasiya, Afrika, Bariga Dhexe, Waqooyiga Ameerika iyo Koonfurta Ameerika;
(3) Marka loo eego baahida macaamiisha gobolada kala duwan, waxaan kuu qaabeynay qaabab kala duwan oo wax yareeyayaal adiga ah, si macaamiishayadu ay tartan weyn ugu yeeshaan suuqa!
(4) Waxaan leenahay in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo qani ah oo ku saabsan macaamiisha siinta alaab tayo sare leh iyo adeegyada ugu xirfada badan!
(5) Waxaan si dabacsan uga dhoofin karnaa badeecadaha deked kasta oo ku taal Shiinaha! Adiga ayaa lagusoo dhaweynayaa inaad wax weyddiiso!
1. Awood wax soo saar oo ballaaran iyo gaarsiin degdeg ah.
2. Xeerarka kormeerka tayada adag ee adag: alaabooyinka oo dhami waa inay ka gudbaan 100% kormeerka kahor keenista.
3. Bixinta adeegga OEM / ODM
4. 24-saac adeegga khadka tooska ah.
5. Weydiinta sheegashada waqtiga dhabta ah
6. Tayo sare, kalsooni sare iyo nolol wax soo saar dheer.
7. Soosaarayaasha xirfadleyda ah waxay bixiyaan sicirro tartan ah.
8. Shaqaale xirfado kala duwan leh oo khibrad badan leh.
Nidaamka maaraynta tayada:
HZPT, wax soo saarka iyo tayada adeegga ayaa la siiyaa mudnaanta ugu sareysa.
Shaqaalaheennu waxay helaan tababar ku saabsan qaababka iyo mabaadi'da tayada leh.
Heer kasta oo ururka ka mid ah, waxaa naga go'an inaan kor u qaadno tayada wax soo saarka iyo geeddi-socodka.
Ballanqaadka noocan oo kale ah wuxuu naga caawiyey inaan soo jiito kalsoonida macaamiisha oo aan noqonno sumcadda adduunka laga doorbido.
Xirmada & Waqtiga Hogaaminta
Keeska Alwaaxda / Weelka iyo sariirtaada, ama sida lagu qeexay tilmaamaha.
15-25days baarka. 30-45days amar amar la'aan
Port: Shanghai / Ningbo dekedda
SU'AALAHA INTA BADAN LA ISWEYDIIYO:
Ku socota Macaamiisha
Wax ka iibsiga Shiinaha miyey faa'iido leedahay?
Shiinaha ayaa wali ah kuwa ugu badan ee wax soo saara adduunka. Waxaa hubaal ah in badeecooyinka aad dooratay ay faa'iido u yihiin suuqyadaada bartilmaameedka ah, maadaama Shiinuhu uu adduunka u siinayo tayo iyo qiimo tartan.
2) Ma u baahanahay inaan u safro Shiinaha si aan u iibsado alaab?
Wax walboo adiga ayaan kuu daryeeleynaa, sidaa darteed waad keydin kartaa qarashka tikidhada hawada, hoteelada iyo safarada. Si kastaba ha noqotee, haddii aad go'aansato inaad booqato Shiinaha, waxaan isku dayi doonaa inaan kuu diyaarino joogitaan cajiib ah si khibradaada safarku u noqoto mid wanaagsan.
3) Alaab noocee ah ayaad keentaa?
Tiro badan oo ah wax soosaarka Warshadaha, Gawaarida iyo Beeraha. Badeecad kasta waxaa loo qoondeeyay koox gaar ah.
4) Maxay yihiin halisteyda ah inaan ka iibsado Shiinaha ama aan kula shaqeeyo?
Asal ahaan wax khatar ah malahan. Waxaan kuu soo iibineynaa adiga waxaadna ku nasan kartaa hubinta kormeerkayaga. Haddii aad hesho waqti aad ku timaado Shiinaha, waad na soo booqan kartaa inta lagu gudajiro wax soo saarka. Waxaad marin u leedahay shabakadahayaga xiriirka iyo kooxda iibka. Waxaan tallaabo dhab ah ka qaadi doonnaa badeecooyinkaaga sida kuweena oo kale Uma baahnid inaad safartid haddii aadan rabin maadaama aad leedahay saaxiibo aqoon u leh Shiinaha.
5) Waxaan kaheli karaa alaab-qeybiyaha alaabtayda kaligay, maxaan kuugu baahanahay?
Waad sameyn kartaa sidaas. Si kastaba ha noqotee, maalgashigaagu wuxuu noqon doonaa mid aad uga sarreeya. Waxaa intaa sii dheer inaadan lahayn lammaane maxalli ah oo suuqa kala yaqaan oo ku siin kara fursad aad ku hesho shabakad fursadeed.
Si aad uga iibsato badeecadaada Shiinaha, waxaad u baahan tahay inaad yeelato xafiis maxalli ah oo aad qandaraas kula saxiixato alaab-qeybiyeyaasha, koox injineer ah si aad u sameyso tayo iyo tiro kormeer waqti ah. Waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato ilaha alaabta ceyriinka ah, arrinta muhiimka ahna waxay tahay inaad ka fogaato wixii dhadhaminaya.
6) Sidee u qaabeysan tahay?
Waxaan leenahay waaxyo kala duwan oo mid waliba ku takhasusay dhinac kasta. Waxaan bixin karnaa caawimaad xagga saadka ah, Kaalmada Sourcing, kaalmada kormeerka, iyo kaalmada sharciga.
7) Adeegani ma wuxuu u yahay shirkad weyn oo keliya?
Maya, waxaan hubnaa in markii ugu horreysay shirkad aad heli doontid kalsooni diiran oo aad ku sii haysato meheraddaada, maaddaama xiriirkeennu ku saleysan yahay daacadnimo iyo faa'iidooyin wadaag ah, marka mustaqbalka waad ballaarin doontaa ganacsigaaga. Waan ku daryeelnaa oo waxaan kaa dhigeynaa inaad ka sii xoog badan tahay sidii hore. Ka sii wadida xoog ilaa xoog wadajir.
Waxaan soo dhaweyneynaa shirkad kastaa yar iyo weynba, aan horumar sameyno. . .
Weydiimaha badan fadlan noo soo dir email
Soo-saaraha: Kumbuyuutarka hawada, hoos-u-dhiciyaha hoos-u-dhaca, hoos-u-dhiciyaha xawaaraha, goos gooska dixiriga ah, sanduuqyada dixiriga ah, sanduuqyada meeraha, goos gooska dixiriga, kala-duwanaanta, qalabka helical, gearbox-ka meeraha ah, qalabka biraha ee muquuninta ah, sanaadiiqda beeraha, cagafyada gawaarida, gudbinta awoodda gawaarida gawaarida szp-group
Xiriir: PTO Shafts Trcuk Driveline Drive Shafts
Waa maxay PTO Drive Shaft?
Waa maxay sababta u dooratay dixiriga yareeya?
Noocyada Isku-xidhka iyo Isticmaalkooda
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ee Racks-ka-helical iyo Toosan ee Gear-ka
Isbarbardhigga Saddexda Nooc ee Jilibka
Xuquuqda daabacaadda 2008 Dhamaan xuquuq dhowran. Shiinaha-reducers.com